Man United Oo Chelsea Ku Soo Garaacday Stamford Bridge, Xaalada Sarri Oo Musiibo Isku Badashay Iyo Red Devils Oo Sideed dhamaadka FA Cupka U Soo Baxday. - Cadalool.com
Man United Oo Chelsea Ku Soo Garaacday Stamford Bridge, Xaalada Sarri Oo Musiibo Isku Badashay Iyo Red Devils Oo Sideed dhamaadka FA Cupka U Soo Baxday.
February 19, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Manchester United ayaa u soo baxday wareega siddeed dhamaadka tartanka FA Cupka kadib markii ay Chelsea ku soo garaaceen Staford Bridge. Ander Herrera iyo Pual Pogba ayaa United guushan ku soo hogaamiyay iyaga oo min hal gool oo madax ah dhaliyay qaybtii hore ee kulankan.
Chelsea ayaa lumisay rekoodhkii fiicnaa ee ay Man United ka soo haysatay waxayna kooxda Maurizio Sarri sii dhex gashay musiibo kale iyada oo hadda macalinka reer Talyaani uu halis wayn ugu jiro in uu shaqadiisa lumiyo. Man United ayaa ka soo aarsatay Chelsea oo ay xili ciyaareedkii hore guuldaro kagala kulantay finalkii isla FA Cupka.
Manchester United ayaa wareega siddeed dhamaadka FA Cupka kula biirtay kooxda ay dariska yihiin isla markaana ay sida wayn u xifiltamaan ee Manchester City iyada oo Blues lumisay in ay sii wadato difaacashada FA Cupka.
DAQIIQADII 11 aad Chelsea ayaa heshay laba fursadood oo xidhiidh ah oo ay goolka furitaanka midkastaba ku dhalin kartay kadib markii uu David Luiz uu darbo laaga xorta ah uu ku dhalin gaadhay marka hore goolkan laakiin Sergio Romero ayaa badbaadin fiican sameeyay balse markale Pedro ayuu ka beeniyay goolka uu dhalin lahaa.
Chelsea ayaa bilawgii ciyarta ahayd kooxda fursadaha ugu badan abuurtay laakiin dhamastir la’aanta weerarka Chelsea iyo waliba difaacashada iyo shaqadii uu Romero qabtay ayaa Chelsea ku qasbay in ay hoos u dhigaan heerkii ciyaarta ay ugu bilawdeen.
Manchester United ayaa ciyaarta ku soo gashay qaab taxadar badan balse difaacasho badan iyo weeraro deg deg ah oo kubado dhaadheer ah iskugu jirtay, waxayna noqtay qorshaha iyo hubka ugu wayn ee ay Man United ku ciqaabtay Chelsea.
Daqiiqadii 25 aad goolhaye Kepa ayaa musiibo isku abuuri kaadhay kadib markii uu aad ula daahay kubbad uu Azpilicueta ku soo furtay wuxuuna ku sigtay in Rashford uu ku soo gaadho balse isaga oo sii dhacayo ayuu kubbadu is dhaafiyay.
Daqiiqadii 31 aad Manchester United ayaa si layaableh neefta ugu celisay jamaahiirta Stamford Bridge kadib markii uu Ander Herrera si aan dhibaato lahayn uu darbo madax ah ugu kooxdiisa United ugu keenay goolka furitaanka laakiin Pual Pogba ayaa si cajiib ah u soo sameeyay caawinta goolkan halka difaaca Chelsea ay daawanayeen Herrera oo si cadaadis la’aan ah goolkan ku dhalinaya waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Man United hogaanka kula wareegtay.
Daawo goolkii Herrera.
Daqiiqadii 37 aad Chelea ayaa markiiba heshay fursad ay goolka barbaraha ku keensan kareen kadib markii uu Higuain helay fursad ay yarayd in uu ku helo difaaca Man United laakiin xidiga reer Argentina ayaa awoodi waayay in uu xataa bartilmaameed sameeyo.
Daqiiqadii 45 aad Manchester United ayaa isla qorshihii goolkii hore ku keensatay goolkeeda labaad ee ay xalaada cajiibka ah ku abuuratay waxaana markan darbo kale oo madax ah goolka labaad ku dhaliyay Pual Pogba kaas oo markiisa caawin fiican ka helay Marcus Rashford laakiin Kepa oo kubbada gacanta ku taabtay ayaa awoodi waayay in uu joojiyo waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Man United hoganka ku dheeraysatay.
Daawo goolki Pogba:
Labadii fursadood ee ay Manchester United ku hor heshay goolka Chelsea waxay noqdeen laba gool, waxayna Red Devils si fiican u fahmeen in kubbadaha sare iyo darbooyinka madaxa ahi yihiin waxa ay Chelsea ugu liidatay in ay iska difaacdo waxana qaybtii hore lagu kala nastay 2-0 ay Man United hoganka ciyaarta ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad labada kooxood ayaa garoonka ku soo laabtay iyada oo ayna labada tababare wax isbadal ah samayn waxayna jamaahiirta Blues sugayeen waxa uu Sarri ka sameeyo kooxdiisa qaybtii hore labada gool laga dhaliyay.
Chelsea ayaa dardar cusub la soo laabtay laakiin waxay wali ku adkayd qaabkii ay ku dhaafi lahayd Man United oo awooda saartay in ay labada gool ilaashadaan isla markaana ay goolka niyadjabka ku raadiyaan weeraro rogaal celis ah.
Daqiiqadii 52 aad garsoore Friend ayaa qaatay go’aan muran dhaliyay kadib markii uu kaadhka cas siin waayay Matic oo qalad cadaan ah ku galay Kante isaga oo waliba haystay kaadhka digniinta ah, waxayna ciyaartoyda Blues ka doodeen sababta aanu garsoore Friend kaadhka labaad ee digniinta ah iyo casaanka iskugu raacin Matic.
Daqiiqadii 58 aad Sarri ayaa ciyaarta ka saaray Pedro wuxuuna kooxdiisa ku soo xoojiyay Willian waxayna Blues bilawday in ay raadiso sidii ay marka hore farqiga goolasha u soo yarayn lahayd. Ciyaarta ayaa Chelsea ku noqotay mid adag oo ay Man United la timid difaacasho adag oo ay masuuliyad badan ciyaartoyda oo dhami muujiyeen.
Daqiiqadii 71 aad Sarri ayaa ciyaarta ka saaray Mateo Kovačić wuxuuna kaydka uga yeedhay Ross Barkley wuxuuna Ole Gunnar kaga jawaabay in uu Lukaku saaray isla markaana uu Sanchez ciyaarta soo galiyay.
Eden Hazard ayaa ahaa xidiga kaliya ee Chelsea dadaal badan ka bixinayay laakiin waxa uu ku dhibtoonayay sidii uu ku dhaafi lahaa difaaca United halka Higuain iyo Willian oo ciyaarta soo galay ay baylah badan muujiyeen oo ay dhaqa dhaqaaq ahaan u liiteen.
Daqiiqadii 76 aad Solskjaer ayaa ciyaarta soo galiyay Andreas Pereira wuxuuna badalay Mata laakiin markan Chelsea ayaa waqtiga la baratamaysay si ay xaalada xun ee ay ku jirtay iskaga badbaadiso balse Man United ayaa ahayd kooxda wali dhibaato la’aanta ku difaacanaysay hogaanka ciyaarta.
Chelsea ayaa si buuxda ugu fashilantay in ay wax soo laabasho ah ka samayso ciyaarta waxayna Man United si aan dhibaato lahayn u xejisatay labada gool ee ay qaybtii hore ku hanaaday Blues waxayna sidaa Red Devils ugu soo baxday wareega siddeed dhamaadka FA Cupka iyaga oo Chelsea kaga soo aarsaday Stamford Bridge kadib guuldaradii xili ciyaareedkii hore ee finalkii FA Cupka.